musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Yekutanga Indonesia K-Pop Awards Zvino Live Kutenderera
Tokopedia, kambani yetekinoroji ine musika muIndonesia, yakazivisa maSouth Korea gumi epasi rose megastar mapoka mutsara mukutanga kutenderera pasirese WIB: Indonesia K-Pop Awards musi wa10 Mbudzi 25.
Aya mapoka gumi iBTS neBLACKPINK, maviri evamiriri vemhando yeTokopedia, uye zvakare TWICE, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Chakavanzika Nhamba, uye Aespa.
WIB: Indonesia K-Pop Awards chiitiko chekupa mubairo kubva kunharaunda dzeIndonesia kumapoka ambotaurwa epasirese megastar ane vateveri vakavhota kuburikidza neTokopedia. Iyo WIB Indonesia K-pop Awards 2021 ichave yekutanga mubairo show yakatsaurirwa kune K-pop vateveri muIndonesia, uye ichapawo akasiyana akasiyana emitambo kubva kumapoka.
Nharaunda dzepasirese dzinogona kutenderera WIB: Indonesia K-Pop Awards musi wa25 Mbudzi kubva 19.00 kusvika 21.00 Jakarta Nguva (UTC+7) kuburikidza neTokopedia Play mukati meTokopedia's app uye Tokopedia's official Youtube chiteshi. Fans vanogona kuona kuratidzwa kuburikidza neinotevera link uye vanokurudzirwa kuseta zviyeuchidzo zvekusapotsa iyo yekutanga.
Kubatanidzwa kweakasiyana siyana eSouth Korea mapoka epasi rose megastar muTokopedia yapfuura Indonesia Shopping Time (Waktu Indonesia Belanja kana WIB) mishandirapamwe yakarumbidzwa zvakanyanya, zvichikonzera nhaurirano dzesocial media kunyange kutokwira mumisoro yepasi rose.
Tokopedia's WIB campaign inogara ichiitwa 25 ega ega kusvika kupera kwemwedzi wega wega. MaIndonesia anogona kuwana akasiyana ezvigadzirwa ane akasiyana anoyevedza ekupa kuti kutenga kuve kwakanyanya.